Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc mmeghe na Vietnam
Na-agbasa News Travel • News • Ndi akuko • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc bụ izizi mbụ nke mba ụwa iji mepee Ong Lang Beach nke Phu Quoc, ma dị njikere ịghọ ebe a na-ahọrọ maka njem ezinụlọ, njem ụlọ ọrụ, agbamakwụkwọ nrọ, agbamakwụkwọ ịhụnanya di na nwunye, na ndị ọzọ. The hotel atụmatụ 305 ime ụlọ ezumike, mgbe n'akụkụ ya Ebe obibi Mövenpick Phu Quoc -enye 329lọ obibi 79 na ụlọ obibi XNUMX ọdọ mmiri, zuru oke maka ezinụlọ ma ọ bụ ogologo oge.
Ọ bụ mmeghe ọhụụ nke otu ụlọ oriri na ọ hotelụ Swissụ Switzerland.
"Ihe mmeghe a na - anọchite anya mgbanwe nke ụdị Mövenpick na Vietnam, ma obi dị anyị ụtọ ịme ka ihe nketa anyị Switzerland na akụ nri anyị bara ụba na ụsọ mmiri nke Phu Quoc, ” kwuru, sị Patrick Basset, Onye isi ọrụ na Accor, Upper Southeast & Northeast Asia na Maldives.
Ezie na nkwari akụ ọrụ kacha mma na-adọta si Mövenpick si Switzerland nketa, na ile ọbịa nke ọma nyefere n'aka ndị ọrụ ya bụ ngosipụta doro anya banyere ọdịdị na-ekpo ọkụ na nke enyi nke ọdịbendị Vietnamese obodo.
Ezubere nke a ụdị ebe okpomọkụ, Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc kwekọrọ na nke oge a na nke ọdịnala na-ejikọ aka na ọtụtụ ọkụ eke Na-asọgharị na windo zuru ezu. Ime ụlọ ezumike nke oge a na-egosipụta ime mara mma na ụda na-anọpụ iche. Glasszọ enyo n’uko ruo n’uko na-eduga na ya mbara ihu nkeonwe na ime ụlọ nkwari akụ ọ bụla, na-enye echiche dịgasị iche banyere oké osimiri na-egbuke egbuke ma ọ bụ ugwu ndị na-acha uhie uhie. Rangelọ dị site na mbara igwe square 35 buru ibu ruo mita 72 n'ogologo maka Junior Suite. Ihe nkasi obi nke oge a gụnyere WiFi dị oke ọsọ, menu ohiri isi, na minibar zuru ezu.
Maka oge ịnọ ogologo oge na ngwụsị izu, Ebe obibi Mövenpick Phu Quoc atụmatụ ụlọ ọrụ na ụlọ ezinụlọ, onye ọ bụla nwere kichinet. The resotu mgbagwoju nwekwara atụmatụ 66 ime ụlọ abụọ na ime ụlọ atọ kpara gburugburu ọdọ, mgbe 12 ime ụlọ ime ụlọ atọ na na Presidential Villa enye osimiri n'akụkụ ebe ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ ọdịda anyanwụ mgbede.
Ihe nkpo nri nke Mövenpick putara ihe na iri nri di egwu ndi di na ya ụlọ oriri na ọ restaurantsụ hotelụ na ụlọ mmanya, tinyere klọb nke osimiri dị n'akụkụ aja ọla edo nke Ong Lang Beach. Mepee maka ndị ọbịa na ndị ọbịa, Clublọ Aura Beach Njirimara ọdọ mmiri ọdọ mmiri, menu Asia Tapas mara mma, ihe ọgbụgba okike, ememe ọdịda anyanwụ kwa ụbọchị na ntụrụndụ na-atọ ụtọ. Ihe oriri ndị ọzọ na-atọ ụtọ na họtel ahụ gụnyere nri mba ụwa na ebe a na-esi nri dị ndụ Islandlọ oriri na ọerụ Islandụ Islander; Vietnamese ọkacha mmasị na nri mmiri na Lang Chai; obodo nka biya na Ogwe Lang Chai; na Vietnamese tii, kọfị & chocolate hour na Waverly ezumike.
The ụlọ oriri na ọ familyụ familyụ nke ezinụlọ na-ekwe nkwa ịmepụta oge bara uru maka nne na nna na ndị njem obere yana Clubmụ obere nnụnụ na M ezumike ụlọ ntorobịa. A Ezinụlọ Mövenpick mmemme na-achota mkpa nke ndị ọbịa na-eto eto, gụnyere afọ iri na otu ịsa ahụ na menu nri Ike.
Ebe ezumike na-enye isii ọdọ mmiri, gụnyere ọdọ mmiri ụmụaka abụọ. Welllọ ọrụ ọma ndị ọzọ gụnyere Mmebe Ahụike Elements nke nwere akụrụngwa ọgbara ọhụrụ na ụlọ ọrụ yoga. Maka oge ọgwụgwọ ụfọdụ, Elements Spa & lonlọ Mmanya atụmatụ ụlọ ọgwụgwọ 15, sauna na jacuzzi. Ndị ọbịa nwere ike ịhọrọ ọtụtụ usoro ọgwụgwọ ọdịmma, ịhịa aka n'ụkwụ, yana ọgwụgwọ ntutu na ntu.
Enweghị obere nkọwa agbachitere agbamakwụkwọ na ememe na Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc. Na Njirimara 720 square mita Coral Ballroom atụmatụ oghere na-enweghị kọlụm nke nwere uko ụlọ dị mita 6.8 na nnukwu oghere nke nwere mita 324 nke nwere ike ịnabata ndị ọbịa 860. A pụkwara ikere ụlọ ịgba bọl ahụ n'ime ime ụlọ nzukọ anọ maka nzukọ ọgbakọ pere mpe.
Ọnọdụ ihu igwe magburu onwe ya na-enye ohere maka nyocha sitere n'ike mmụọ nsọ nke agwaetiti ahụ. Ọbịa nwere ike gafere otu oke ohia nke na-eduga na nsụda mmiri ma ọ bụ bask na ịdị jụụ nke ụsọ osimiri nwere ndo. A tọrọ ụtọ njegharị nri site na ahia abali, ma obu ileta ugbo, ugbo ugbo ma obu ulo ahia ihe omimi na enye ndi mmadu uzo ndu nke ndi Vietnam.
"Anyị na-atụ anya ịnabata ndị ọbịa n'ụlọ obibi agwaetiti anyị na Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc. Ọbịa nwere ike na-atụ anya na-akpali akpali usoro nke curated ahụmahụ mgbe ha na ha na anyị, si agwaetiti ịgagharị ka nri njem na abalị ahịa. Ebe ezumike a na-enye ezumike zuru oke n'àgwàetiti site na ọgba aghara na ndụ obodo maka ndị na-achọ iso ezinụlọ ahụ nọrọ izu ụka dị jụụ,”Ka Philippe Le Bourhis, onye isi njikwa nke Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc kwuru.
Iji mee ememme ya, Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc na-enye onyinye ngwụsị izu na ọnụego na-amalite na VND 2.000.000 kwa abalị na ụlọ Studio Mountain View King na nri ụtụtụ maka mmadụ abụọ na kredit kwa ụbọchị nke VND 1.000.000, nke nwere ike ịbụ gbapụtara maka iri nri ma ọ bụ ọgwụgwọ spa. Onyinye mmeghe ahụ dị irè site ugbu a ruo 31st October 2020.
Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc na Mövenpick Residence Phu Quoc dị na 1 Ong Lang Beach, Cua Duong Village, Phu Quoc, Vietnam, mbufe nkeji 35 site na Phu Quoc International Airport. Agwaetiti ahụ bụ ụgbọ elu na-ewe otu awa site na Ho Chi Minh City, awa abụọ site na Hanoi, ma jikọọ na ụzọ ndị si Bangkok, Seoul, na Singapore. Maka ndoputa, biko zitere email [email protected] ma ọ bụ kpọọ +84 (0) 297 26 99999. N'aka nke ọzọ, iji mụtakwuo maka Mövenpick Hotels & Resorts, biko gaa na www.madu.com.